Fanantenana ny amin’ilay fiteny Nepali andalam-pahafatesana rehefa nindaosin’ny fahafatesana teo amin’ny faha-85 taonany ny olona farany nahay ity fiteny ity · Global Voices teny Malagasy
Sangnaan wein (mandria am-piadanana), Gyani Maiya!
Voadika ny 21 Febroary 2020 4:46 GMT
Vakio amin'ny teny Français, русский, Español, Italiano, Ελληνικά, Português, 日本語, Esperanto , English
Tsy dia fantatry ny maro i Gyani Maiya Sen Kusunda saingy izy no feon'ny fanantenana ho an'ireo mpandala ny fiteny izay manantena ny hamelon'aina indray ny fiteny Kusunda mitoka-monina sy andalam-pahafatesana. Nodimandry tamin'ny 25 Janoary 2020 tao an-tranony tao amin'ny tanànakely Kulmor any amin'ny distrikan'ny Dang any amin'ny faritra andrefan'i Nepal teo amin'ny faha-85 taonany izy.
Mivelona mirenireny amin'ny fihazana sy ny fiotazana ny Kusundas ary vao am-polo taonany vitsy lasa izay no nanombohan'izy ireo nanorim-ponenana tao amin'ireo tanànakely, indrindra tany amin'ny faritra andrefan'i Nepal. Vao haingana i Gyani Maiya no nanampy ilay mpikaroka Uday Raj Aaley tamin'ny fanatontosana ny dingana voalohany tamin'ny fampianarana ny fiteny Kusunda ho an'ny vondron'olona miisa 20 maniry ny hianatra ilay fiteny. Tsy niara-niasa tamin'i Uday ihany izy tamin'ny fameloman'aina ilay fiteny fa niara-niasa tamin'ireo mpikaroka toa an-dry Brian Houghton Hodgson, Johan Reinhard, David Watters, BK Rana ary Madhav Prasad Pokharel ihany koa ankoatra ireo hafa.
Nanoratra tao amin'ny Facebook i Uday Raj Aaley, mpikaroka: